Tilikambo avo indrindra eran-tany, manomboka amin'ny Burj Khalifa ka hatrany amin'ny Canadian National | News Travel
tilikambo avo indrindra eran-tany
Louis Martinez | | kolontsaina, mpitarika
ny tilikambo avo indrindra eran-tany Fanorenana vao haingana izy ireo. Na izany aza, ny olombelona dia nitady ny avo hatramin'ny vao mangiran-dratsy. Ohatra tsara amin'izany ny fananganana ny Piramida ejipsianina, izay zavatra akaiky indrindra amin'ireo trano avo be ankehitriny nandritra ny taonjato maro.
Ary koa tamin'ny Moyen Âge, indrindra fa hatramin'ny fisehoan'ny fomba Gothic, dia naorina ny trano avo be. Ohatra, ny katedraly santa maria, any Lincoln (Angletera), izay nahatratra enimpolo amby zato metatra. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny fandrosoana amin'ny haitao dia namela ny Eiffel Tower nahatratra 300 metatra ny haavony. Ary ahoana ny amin'ny faha-1931, rehefa nanorina ny Amerikana, tamin'ny XNUMX, ny Fananganana fanjakana, izay mahatratra 381. Fanampin’izany, izany no nanamarika ny fiandohan’ireo trano avo be, izay tsy inona fa ny tilikambo avo indrindra eran-tany amin’izao fotoana izao. Andeha hasehontsika anao izy ireo.
2 2.- Skytree, tilikambo avo indrindra eran-tany ho an'ny fifandraisana
3 3.- Shanghai Central Tower
5 5.- Tilikambon'ny fahitalavitra Canton
8 8.- National Tower of Canada, ny tilikambo avo indrindra eran-tany any Andrefana
Burj Khalifa, tilikambo avo indrindra eran-tany
novolavolain'ny architect Adrian smith tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ity tranobe ity no avo indrindra eran-tany, miaraka amin'ny azy Metatra 828. Ao amin'ny tanànan'i Dubai, renivohitry ny Emirà Arabo mitovy anarana. Nanomboka ny taona 2004 ny fanamboarana azy ary notokanana enin-taona taty aoriana. Raha ny tetibolany dia 4000 20 tapitrisa dolara, na dia ho gaga aza ianao raha mahafantatra fa 000 XNUMX ihany no vidiny.
Fa kosa, miaraka amin'ny haavony, dia tsy ho gaga ianao raha mahafantatra fa ao anatin'izany ny ascenseur haingana indrindra eto an-tany. Tsy hiditra amin'ny famaritana ara-teknika azy isika, izay mankaleo. Saingy holazainay aminao fa ny Burj Khalifa dia manana hotely, trano fonenana manokana, birao, trano fisakafoanana ary fomba fijery roa mihitsy aza. Ny avo indrindra amin'izy ireo, ilay antsoina hoe Ny Deck Vaovao, dia ao amin'ny rihana faha-148. Ary tokony holazaina ihany koa fa sarotra be ny fiasan'ity tranobe ity, ka isaky ny rihana telopolo dia misy orinasa mekanika hikarakarana azy.
2.- Skytree, tilikambo avo indrindra eran-tany ho an'ny fifandraisana
Tokyo Skytree, tamin'ny fotoana nanamboarana azy
Amin'ity tranga ity, tsy miresaka momba ny tranobe iray isika, fa momba ny tilikambo fifandraisan-davitra misy ao Tokyo. Eny tokoa, antena radio lehibe izy io, saingy manana trano fisakafoanana sy fomba fijery koa. Na izany na tsy izany, miaraka amin'ny 634 metatra ny haavony, io no trano faharoa avo indrindra eran-tany ary voalohany amin'ny karazany.
Nanomboka ny taona 2007 no nanorenana azy io ary notokanana dimy taona taty aoriana. Amin'ny maha te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa ny rafitra anti-seismika dia mifototra amin'ny fomba nentim-paharazana pagoda japoney. Toy ireny, misy andry afovoany izay tsy raikitra ny tapany ambany. Amin'izany fomba izany, dia mihetsika toy ny pendulum izy ary mifehy ny hovitrovitra ateraky ny horohoron-tany.
Ho zava-misy mahaliana ihany koa, dia holazainay fa, tamin'ny fananganana azy, dia mpiasa maherin'ny dimy hetsy no niasa ary tamin'ny andro nanokanana azy dia notsidihina maherin'ny roa hetsy. Amin'ny lafiny iray, raha mankany Tokyo ianao, dia tandremo tsara ny mijery azy amin'ny alina, rehefa mirehitra miaraka amin'ny loko samihafa sy kanto.
3.- Shanghai Central Tower
Shanghai Central Tower, ny avo indrindra any Shina
Ny tanànan'i Shanghai goavam-be any Shina dia mirehareha ny sasany amin'ireo tilikambo avo indrindra eran-tany. Amin'ny ankapobeny, maro amin'izy ireo no mifantoka amin'ny distrika ara-bola pu-dong. Izany no tranga Shanghai World Financial Center, trano avo 492 metatra ny haavony ary 101 rihana. Avy amin'ny Jim Mao tilikambo, misy 420 metatra sy 88 rihana, ary ny tilikambo perla tatsinanana, antena telecommunication an'ny 468.
Saingy ny tilikambo Afovoany vaovao no maka ny mofomamy. Miorina amin'ny velaran-tany 420 metatra toradroa, 000 metatra ny haavony ary misy rihana 632. Ankoatra izany, raha mitsidika ny tanàna ianao, dia hisarika ny sainao izany satria mitovy amin'ny taratasy mivalona goavambe. Mitentina 121 miliara dolara izany ary nanomboka naorina tamin’ny 2400 ka vita fito taona aty aoriana.
Misongadina ny fasadin'ny fitaratra, izay mampihena ny enta-drivotra. Noho izy, dia vitsy kokoa ny fitaovana nilaina tamin’ny fanamboarana azy. Ary ankoatra izany, ny azy endrika miolakolaka Izy io dia ahafahan'ny ranon'orana manangona izay, aorian'izay ary miaraka amin'ny turbin-drivotra sasany, dia ampiasaina amin'ny fanafanana sy ny rivotra amin'ny trano.
Tilikambo Abraj al-Bait
Tokony hiresaka aminareo momba ny fahefatra izahay Dubai Pentominium, nefa mbola eo am-panamboarana. Noho izany, hametraka ny tilikambo Abraj al-Bait amin'ity toerana ity isika, izay mandrafitra, amin'ny lafiny faobe, ny tranobe. lehibe indrindra eran-tany. Mirefy 1 metatra toradroa izy io ary misy trano maromaro.
Mahatratra hatrany amin’ny tilikambo avo indrindra Metatra 601, misy rihana 120, ary hita ao Mkah. Raha ny marina, io no trano avo indrindra ao Arabia Saodita. Amin'ny ankapobeny dia eo ampitan'ny arabe no misy azy moske lehibe. Noho izany antony izany dia misy efitranom-bavaka mahazaka olona 4000 ary hotely kintana dimy handraisana ireo mpivahiny. Misy toeram-pivarotana misy rihana dimy ihany koa ao.
Eo amin'ny fasadany dia hisarika ny sainao izany famantaranandro goavam-be amin'ny 43 metatra izay mipetraka amin'ny lafiny efatra amin'ny tilikambo iray. Ary ho gaga ihany koa ianao amin'ny fanjaitra goavana izay manarona ny fanorenana ary mirefy 93 metatra. Eo ambaniny dia misy foibe ara-tsiansa izay ampiasaina hijerena ny volana.
5.- Tilikambon'ny fahitalavitra Canton
Miverina any amin'ny Shina mba hilaza aminao ny momba ity fanorenana hafa ho an'ny fifandraisana izay, miaraka amin'ny haavo 600 metatra, dia anisan'ny tilikambo avo indrindra eran-tany ihany koa. Izy io dia naorina ho an'ny Lalao Aziatika 2010. Namorona azy io ny Holandey barbara kuit y Mark Hemel, izay nanamboatra tranobe avant-garde nentanin'ny asan'ny injeniera Rosiana Vladimir Shukhov.
Noho izany dia manolotra a rafitra hyperboloid noforonin'ny ellipse roa amin'ny haavo samihafa. Fa ny tena mahagaga momba ity tilikambo ity dia ilay antsoina hoe mandehandeha eny amin’ny lanitra, tohatra ivelany mipaka any ambony. Izy io koa dia manana zaridaina ivelany ary, ankoatra ny fahitalavitra, trano fisotroana kafe, trano fisakafoanana ary na dia sinema misy lafiny efatra aza.
Ping a Finance Center
Mitohy any Shina ny miresaka aminao momba ity tranobe ity izay hita ao amin'ny tanànan'i Shenzhen, an'ny faritany mitovy amin'ny Ny INSEE dia. Izy io dia manana haavo 599 metatra miparitaka amin'ny rihana 115.
Izy io dia noforonin'ny studio amerikanina architecture Khon Pedersen Fox ary hovitaina amina trano avo iray hafa mirefy 293 metatra ny haavony ary 51 rihana. Izy io dia naorina ho foiben'ny orinasa fiantohana matanjaka Ping An Insurance ary manana iray amin'ireo toeram-pandinihana ambony indrindra eran-tany, satria 592 metatra izy io.
Ao anatin'ny tazo Aziatika ho an'ny fanorenana goavana dia tonga amin'izao isika Korea Atsimo mba hilaza aminao momba ity tranobe mirefy 555 metatra sy 123 rihana ity izay anisan’ny tilikambo avo indrindra eran-tany. Ao amin'ny Seoul, no avo indrindra ao amin'ny fireneny ary manana toeram-pandinihana any amin'ny haavo maherin'ny dimanjato metatra. Alao sary an-tsaina ny fomba fijery.
Nanomboka ny taona 2010 ny fanamboarana azy ary vita fito taona taty aoriana. Ety ivelany dia miendrika cone manify miaraka amin'ny sisiny miendrika miendrika fiolahana malama. Ny fasana dia fitaratra miloko marevaka izay maka tahaka ny seramika Koreana ary misy singa filigree metaly. Ao anatiny dia misy fivarotana, birao, trano ary hotely mihaja. Na izany aza, raha mitsidika azy ianao, dia afaka miditra amin'ny toeram-pandinihana, satria natao ho an'ny besinimaro.
8.- National Tower of Canada, ny tilikambo avo indrindra eran-tany any Andrefana
National Tower of Canada amin'ny alina
Tena nilaina ny nahatratra ny toerana fahavalo mba hahitana ny tilikambo avo indrindra eran-tany any Andrefana. Momba ity tilikambom-pifandraisana ity izay hita ao amin’ny tanànan’i Toronto. Hatramin'ny fitokanana ny Tokyo Sky Free dia io no avo indrindra eo amin'ny tontolon'ny karazany ary, na dia amin'izao fotoana izao aza, dia mijanona ho avo indrindra any Amerika.
Ny haavony dia Metatra 553 avo ary manana velaran-tany fijerena 447 metatra. Ny zava-misy fa tafiditra ao anatin'ny Fahagagana fito amin'ny tontolo maoderina avy amin'ny American Society of Civil Engineers. Nanomboka tamin’ny 1973 ny fanorenana azy ary roa taona monja no lasa vao vita. Marina fa niasa 24 ora isan’andro sy 365 andro isan-taona izy ireo.
Mitentina telo hetsy tapitrisa dolara teo ho eo izany tamin’izany. Saingy naneho tombontsoa maro ho an'ny fifandraisan-davitra izy io ka dimy ambin'ny folo taona taty aoriana dia nofoanana. Raha ny marina, dia izao no iray amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe indrindra any Toronto ary mitsidika olona roa tapitrisa isan-taona.
Raha manao izany ianao, dia ho talanjona amin'ilay toerana fijerena ambanin'ny fitaratra mirefy 342 metatra ambonin'ny tany. Mbola afaka miakatra ambony kokoa ianao, satria misy tohatra ivelany miakatra hatrany amin’ny 447. Fa izany no ampiasaina amin’ny vonjy taitra. Indroa isan-taona ihany no misokatra ho an’ny besinimaro amin’ny hetsika fanasoavana.
Etsy ankilany, ankoatry ny fiasa mifandray aminy dia manana trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana maromaro izy. Anisan’ny voalohany, misongadina ilay mirefy 351 metatra satria mandeha lampihazo mihodinkodina enimpolo amby telonjato degre. Ny fomba fijery dia tena mahavariana ka, amin'ny andro mazava, dia afaka mahita ny tanànan'i Rochester, any amin’ny fanjakan’i New York.
Ho famaranana, nasehonay anao ny valo tilikambo avo indrindra eran-tany. Saingy tsy afaka manohitra ny filazana ireto manaraka ireto isika. dia ny vaovao Foibe Ara-barotra Iraisam-pirenena any New York mihitsy, miaraka amin'ny haavony 541 metatra; ny Ostankino Tower de Moscow, izay avo indrindra any Eoropa amin'ny 540 metatra, ary ny CTF Finance Center, any Canton indray, izay mirefy 530. Moa ve tsy toy ny fanorenana mivaingana izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » tilikambo avo indrindra eran-tany
Ahoana no nanorenana ny piramidan'i Ejipta?
Tanàna amorontsiraka mora hipetrahana